***ရွာသူလေး ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး (မွန်ရိုးရာ မုန့် ဟင်းခါး)** | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ***ရွာသူလေး ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး (မွန်ရိုးရာ မုန့် ဟင်းခါး)**
Posted by ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) on Aug 23, 2011 in Food, Drink & Recipes |6comments
ချမ်းချမ်း မွန်မုန့်ဟင်းခါးအကြောင်းရေးလို့ မွန်ပြည်နယ်စရောက်ခါစကိုသတိရတယ်။ရေးမြို့ အရုတောင်ရွာမှာဈေးဝယ်တာ မွန်လို ကိုယ်ကမတတ်၊ ရောင်းသူက မြန်မာလိုမတတ်။ဒါနဲ့ လိုချင်တာယူပြီး ပိုက်ဆံ မှန်းပေးလိုက်တယ်။ပိုတာပြန်အမ်းတယ်။အဆင်ကိုပြေလို့။
ကျွန်တော် လည်း မွန်သွေး ပါတယ် ဗျ
ချမ်းချမ်း ပို့ စ်လေး ဖတ်ပြီး
အဲဒီ မုန့် ဟင်းခါး ကို စားချင်လာပြီနော်
တွေ့ ရင် ချက်ကျွေးရမယ်
ဟယ် ချမ်းချမ်းကတော့ ပြောနေပီ ချွေးမတော့သေမယ်သာပြင်ပေတော့။ကြိမ်းထားတယ်နော့ မုန့် ဟင်းခါးလဲကျွေးမှာ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကို ခိုင်းမယ့်ပုံ ဟိ ဟိ. ဝေးဝေးရှောင်မှ
“”””တတ်သမျှ မှတ်သမျှ ကြိုးစားပမ်းစားချက်ထားသောကြောင့် ချက်တဲ့အိမ်ရှင်မ အမောပြေရန် မကောင်းလဲ ကောင်းတယ် မစားချင်လဲစားချင်တယ်ဟုပြောပါ။မပြောပါက နောက်နောင် ချက်ကျွေးတော့မည်မဟုတ်ပါ။
“သတိရလိုက်တာ ချစ်သူရယ် ဒီမှာ ငါမကုန်တော့ဘူးဟ..”””””. ချက်ကျွေးပါနော် အလည်လာရမယ့်သူ တောင် စိတ်ပျက်သွားတယ်နော်။.
အော် ဒါနဲ.့ လေ ချမ်းချမ်းရေ မွန်ထမင်းချက်တော့ ဘာအတွက်ဖယောင်းထည့်ရတာလဲ ရှင်းပြပေးပါလားနော်။သိချင်လို့ ပါ။စပ်စုတယ်တော့မထင်ပါနဲ့ ဦး
ချမ်းချမ်းရေးလို့ မော်လမြိုင်ဘုရားဖူးသွားတုန်းက မော်လမြိုင်ရောက်တော့ ဆရာဝန်အသင်းကနေ ကြိုဆိုနေရာချပြီး ကျွေးတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကို ပြန်လည် သတိရနေမိတယ်။ ငှက်ပျောအူတွေ ပုဂံထဲအမောက်ထည့်ပေးပြီး ကောက်ညှင်းပေါင်းပါ ထည့်စားခဲ့ရပါတယ်။ သတိရလိုက်တာ ကျိုက္ခမီ၊ စက်စဲရယ်….